Inty sy Nday: Handroso maty raibe, hihemotra, maty renibe !
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Inty sy Nday: Handroso maty raibe, hihemotra, maty renibe !
Rechercher Valider	Inty sy Nday: Handroso maty raibe, hihemotra, maty renibe !	Imprimer	Oha-pitenenana malagasy manana ny lanjany eo anivon’ny fiainam-piaraha-monina andavanandro io. Rehefa miseho ny tranga iray ka mety hisy fiatraikany amin’ny lafin-javatra hafa, dia matetika no ampiasaina io nofidiana ho lohateny io. Ny raharaha Razaimamonjy Claudine no ampifandraisintsika amin’io lohateny io.
Na hampodiana an-tanindrazana i Claudine Razaimamonjy ka miatrika ny fitsarana azy, na hijanona any ampitan’ny ranomasina any izy dia naman’ny tsy maty manota…. Dia mitovy ihany fa tsy maintsy hisy akony eo amin’ny tontolom-pitantanana ny fiainam-pirenena izany.raha mody moa izy ka mitohy ny fitsarana azy, dia tsy maintsy ho voarohirohy ao ny ankamaroan’ny tompon’andraiki-panjakana ambony eto, na ny amin’izao fotoana na ny talohakelin’ny ankehitriny . Maroloha loatra mantsy ny tsikombakomba avo lenta niarahana tamin-dRazaimamonjy Claudine ka heverina fa lojika be io tombana io.
Raha hijanona any ampita any koa anefa izy dia mbola hitranga ihany ny tsy fankasitrahan’ny vahoaka ny fitondrana satria ny fitondrana no zary tsy mitaky ny fampodiana azy eto. Dia hiandry ny teboka sy sioka tokana ny vahoaka, ka hitsangana amin’izay. Ny tian-kambara dia tsotra : Nahoana moa raha miezaka mifandresy lahatra ianao ao anatin’ny fitondrana ambony io, indraindra fa ireo mahatsiaro ny tenany ho voarohirohy amin’ity raharaha Razaimamonjy, hatramin’ireo voambara fa niara-nipetsapetsa tamin’ny fampandosirana azy any amin’ny Nosy Maorisy. Dia manaiky ny hampodiana an’i Claudine Razaimamonjy, ary manaiky ny fanasaziana azy araka ny lalàna. Mety hitranga hatramin’ny fanagadrana am-ponja izany e !
Dia manomboka mampiseho ny fitondrana fa tena hampihatra ny tany tan-dalàna e ! Dia mba samy mizaka ny vokany ny tsirairay. Ny vahoaka aloha dia hihoby ny mpitondra amin’izay fotoana izay, ary hisy akony hatrany amin’ireny resaka fitsaram-bahoaka ireny izany.
Raha sanatria mantsy ka avela hilamindamina any ivelany any i Claudine Razaimamonjy dia ianareo mpitondra ambony ireo mihitsy no mety hiharan’ny « fitsaram-bahoaka » (amin’ny heviny malalaka io).
Vanim-potoana itakian’ny hasin’ity tanindrazana ity ny fahatsiarovantenan’ny tsirairay izao, ka misarika ny fisainan’ny mpitondra fanjakana izay mbola manana ilay fahatsaram-panahy izahay hitsinjo ny ho avin’ny firenena sy ny taranaka any aoriana any. Tsy tombontsoam-pirenena ny tsy hampodiana an’i Claudine Razaimamonjy an-tanindrazana mba hotsaraina.